2021 အတွက်ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ BMW ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး M Model! – MyMedia Myanmar
2021 အတွက်ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ BMW ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး M Model!
ယခုနှစ် နှောင်းပိုင်းလောက်မှာ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ BWM ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး M Car အကြောင်း ကိုတော့ M Division ရဲ့ 2020 ခုနှစ် အတွင်း ရောင်းအားတွေ အကြောင်း ရှင်းလင်းရာမှာ BWM ဘက်ကနေ တစ်ပါတည်း အတည်ပြုပေးခဲ့ ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းနဲ့ ပက်သက်လို့တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ လ တုန်းကလည်း မထင်မှတ်ပဲ သွယ်ဝိုက်ကာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားဖူးတဲ့ အကြောင်း အရာ တစ်ခု လည်း ဖြစ်လို့ နေပါတယ်။ M Town လို့ နာမည် ပေးထားတဲ့ စီးပွားဖြစ် ရိုက်ကွင်း တစ်ခုမှာ ဆိုရင် အမိုးဖွင့် E 92 M3 Pickup ကို အကြမ်းဖျဉ်း ဖော်ပြထားခဲ့ပြီး ကားရဲ့ ဘေးဘက်တွေမှာလည်း 26 2021 ဆိုပြီး ဖော်ပြထားခဲ့ တာကို တွေ့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အမှတ်အသားကတော့ ကားအသစ် ထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ရက် ကို အကြမ်းအားဖြင့် သဲ လွန်စ ပေးထားတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ခန့်မှန်းရမယ် ဆိုရင် အခု ၂၀၂၁ ရဲ့ ၂၆ ပတ် မြောက် ရက်သတ္တပတ်လည်း ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရမယ် ဆိုရင်တော့ ထုတ်ဖော်ပြသမှုကို လာမယ့် ဇွန်လ ၂၈ ရက် နေ့နဲ့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက် နေ့ လောက်အ ကြားမှာ ဖြစ်လာနိုင်တာပါပဲ။
အခု သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ကားအသစ်ရဲ့ Identity ကိုပါ ပြောကြားသွားခဲ့ခြင်း မရှိသေးပဲ BMW အနေနဲ့ M GmbH ကို ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး ကားတစ်စီးနဲ့ တွဲဖက်ပြီး အသုံး ပြုသွားမယ်လို့သာ ပြောကြားသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ မရှင်းလင်းသေးတဲ့ တစ်ချက် ကတော့ အဆိုပါ ကားအသစ်ဟာ လုံးဝ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သီးသန့်သုံးလား ဒါမှမဟုတ် Hybrid အနေနဲ့ပဲ လား ဆိုတာပါပဲ။ တစ်ချို့က‌လည်း i4 အမျိုး အစား ကိုမှ M-Branded Version အနေနဲ့ ထွက်ပေါ် လာမယ် လို့ ဆိုထားသလို အချို့ကလည်း BWM အနေနဲ့ X8 M Plug-In Hybrid ကား အသစ်ကို မိတ်ဆက်လာမယ် ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး ပြောဆို နေကြတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ် စွမ်းအင် သုံးလာမယ့် M Car ဟာ M4 Convertible နဲ့ တွဲပြီးလာမယ့် နွေဦး လောက်မှာ ပွဲထွက် လာနိုင်တယ်လို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအရ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စွမ်းဆောင်ရည်အ သားပေး Wagon ကား တစ်စီးကို လည်း ဖန်တီးနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ BMW ဘက်က ဆိုထားတာ ကြောင့် M3Touring ဖြစ်လာနိုင် တဲ့ အဆိုပါ ကားကို ဆက်လက် ပြီး စောင့်ကြည့်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ M5CS အမျိုး အစားကို လာမယ့် ရက် အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ပွဲထုတ်ပြမယ်လို့ သိထားရပြီး King-Of-The-Hill5Series ကိုမှ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး အလေးချိန် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လောက်နဲ့ပဲ ထွက်ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ BMW အနေနဲ့ Manual Gearbox နဲ့ M Models တွေ အကုန်လုံးကို Automatic-Only Competition Version တွေနဲ့ အစားထိုး‌သွား တော့မယ် လို့ ဆိုထားတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Pedal ၂ ခုနဲ့ ထုတ်လုပ်လာမယ့် Setup အသွင်ကတော့ ZF က ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ Drivelogic နဲ့ Eight-Speed M Steptronic Transmission စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာ ကတော့ M2Competition ဟာ DCT Transmission စနစ်ကို ဆက်လက် မရရနိုင် တော့ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး BMW ဘက်ကနေ ကြားသိရသလောက် ကတော့ M3နဲ့ M4Models တွေ အကုန် လုံးမှာ xDrive AWD System ကို အစားသွင်း ပေးလာမယ် လို့ဆိုထားပြီး Dynamic Duo အတွက်တော့ ပထမဆုံး ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။ 2022 အတွက် ကြိုကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ M ရဲ့ အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ Honcho Markus Flasch ကတော့ စိတ်လှုပ်ရှား စရာ တွေ ပြည့်နှက် နေမယ့် နှစ်တစ်နှစ် လို့ ဖော်ကျူးထားခဲ့ပြီး M Division အမျိုးအစား အနေနဲ့လည်း ရာစုနှစ် တစ်ဝက် သက်တမ်း ကို မှတ်တမ်းဝင် စိုက်ထူနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post 2021 အတွက်ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ BMW ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး M Model! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-20T19:30:43+06:30January 20th, 2021|MYCARS MYANMAR|